Tag: zoominfo jikọọ
ZoomInfo: Dobe B2B Data emelitere
Sọnde, Septemba 15, 2013 Douglas Karr
Nnọọ ntakịrị nke data B2B gị agaala. Zoominfo na-akọ na 70% nke data B2B niile ga-enwe otu ma ọ bụ karịa mgbanwe n'ime afọ. Ndị ọrụ gbanwere, nkwalite, nnweta, mmechi azụmahịa… ya niile nwere ike ịchụpụ ogo data ị na-atụ anya. Okwu data ndị a nwere ike ibute nsogbu na ahịa na ọre ahịa. Na ahia, ọ bụrụ na ndị otu na - apụ apụ na - akpọ ozi ma ọ bụ zigara ndị mmadụ ozi na - anọghịzi, oge eruola